बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरी; ३० को मृत्यु - BBC News नेपाली
बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरी
१ अप्रि. २०१९१ अप्रि. २०१९
आइतवार साँझ आएको हावाहुरीका कारण पूर्वी तराईका बारा र पर्सा जिल्ला नराम्ररी प्रभावित
कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु: प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत
छ सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते
बारामा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति
राहत तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी तथा अन्य निकाय परिचालित
प्रदेश नं २ सरकारले सबैको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय
सङ्घीय सरकारले पठायो काठमाण्डूबाट चिकित्सक
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा
इमेल पठाउनुहोस् nepali.letters@bbc.co.uk
पोस्ट गरिएको 10:02 १ अप्रि.10:02 १ अप्रि.
पर्सा र बारामा आइतवार साँझ आएको हावाहुरीका असरहरूका बारेमा ताजा जानकारी दिन राखिएको हाम्रो लाइभ पृष्ठको हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।
यो लाइभ पृष्ठमा अब थप जानकारी राखिने छैन। यस घटनामा हाम्रो थप समाचार सामग्रीका लागि हाम्रो गृहपृष्ठमा जानुहोला।
पोस्ट गरिएको 9:47 १ अप्रि.9:47 १ अप्रि.
प्रभावित गाउँहरू उजाड, स्थानीय अन्योलग्रस्त
म सोमवार सुरूमा बाराको पुरैनिया पुगेँ। त्यहाँ पुग्दा गाउँमा केही पनि बाँकी नरहेजस्तो उजाड देखिन्थ्यो।
घर, रुख, पोल सबै ढलेका थिए। मानिसहरू अरूको घर भत्किएको अवस्था कस्तो छ, उपचारका लागि को को अस्पताल जान पाए वा कोही घरमै फसिरहेका छन् कि भनेर खोजी गरिरहेका थिए।
हावाहुरीमा परि आफन्त गुमाएकाहरू घरमै रोइरहेका थिए। वृद्धवृद्धा अनि बालबालिकाहरू पनि रोइरहेका देखिन्थे।
त्यहाँ पुग्दा अचम्म लागेको चाहिँ त्यहाँ छेउछाउका अरू गाउँहरूमा कतै क्षति पुगेको थिएन।
पुरैनिया सहित अति प्रभावित बाराको फेटा, भरवलिया, र चैनपुरमा मानिसहरू अब के खाने र के लगाउने भन्ने अन्योलमा देखिन्थे।
रातिदेखि नै उद्धारका लागि खटिएका तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू पनि गाउँमा मानिसहरू र बचेका सरसामान निकाल्न लागि परेका छन्।
कति घरबाट खानेकुराहरू निकालिँदै थियो भने कति घरबाट लत्ताकपडा झिकिँदै थियो। केहीले चाहिँ आफ्नो घरमा जोगिएको खानेकुरा समूहमै बाँडेर पनि खाइरहेका थिए।
चाहे फुसको घर होस् वा सिमेन्टको, घरहरू सबै भत्किएका छन्।
ती क्षेत्रमा घरहरू ढल्नुका साथै सानादेखि ठूला सबै रुखहरू जरैसम्म उखेलिएर ढलेको देखिन्छ।
मानिसहरू हिजो रातिको घटनामा के भयो कसरी भयो भन्ने अन्योलमै देखिन्छन्। तिनीहरूले रातभरि डरका कारण सुत्न नसकेको बताएका छन्।
पोस्ट गरिएको 9:44 १ अप्रि.9:44 १ अप्रि.
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भीषण हावाहुरीका कारणले बारा र पर्सालगायतका जिल्लामा भएको ठूलो मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
उनले घाइतेको यथाशीघ्र उपचारको प्रवन्ध मिलाउन र राहतको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
राष्ट्रपतिले हावाहुरी, बाढी, पहिरो, डढेलो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिन र जोगाउन सम्बद्ध सबै पक्षले समयमा नै पूर्व सावधानी अपनाउन र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका सबल उपायहरू अवलम्बन गर्न सरोकारवाला सबै पक्षहरू सचेत रहन समेत ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
पोस्ट गरिएको 9:26 १ अप्रि.9:26 १ अप्रि.
हावाहुरी प्रभावितहरूलाई नेकपा सांसदहरूले एक दिनको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने
पोस्ट गरिएको 8:56 १ अप्रि.8:56 १ अप्रि.
हावाहुरीको वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई बढी असर
थप तस्बिरहरू यहाँ हेर्नुहोस्।
पोस्ट गरिएको 8:38 १ अप्रि.8:38 १ अप्रि.
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव बाराको सिमरा विमानस्थलमा पुगेका छन्।
प्रम ओलीले अस्पतालमा गई घाइतेहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको बीबीसी नेपाली सेवाकी सम्वाददाता माधुरी महतोले बताएकी छन्।
प्रम ओलीले अति प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भैनसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
पोस्ट गरिएको 8:34 १ अप्रि.8:34 १ अप्रि.
३७८ घाइतेको उपचार हुँदै
गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्रले आइतवार बारा र पर्सा जिल्लामा हावाहुरीका कारण पुगेको क्षतिको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रले मृतकहरूको संख्या २७ भनेको छ भने स्थानीय अधिकारीहरूले उक्त संख्या कम्तीमा पनि ३० रहेको जनाएका छन्।
पोस्ट गरिएको 8:30 १ अप्रि.8:30 १ अप्रि.
पिउने पानी र खानाको समस्या
बारा जिल्लाको पुरैनिया, भरबलिया लगायतका हावाहुरी प्रभावित गाउँहरुमा पिउने पानी र खानेकुराको समस्या देखिएको पीडितहरूले बताएका छन् ।
उद्धारको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। राती अँध्यारोको कारण उद्धारमा कठिनाइ देखिएपनि सोमवार बिहानैदेखि उद्धार कार्य तीव्र बनाइएको थियो।
उद्धारमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरु, समाजिक कार्यकर्ता, पेशाकर्मी लगायत सबै पक्ष जुटेका छन् । उद्धार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित सबै मन्त्रीहरु अहिले बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयास्थित जिल्ला अस्पतालमा छन् । त्यहाँबाट प्रभावित गाउँहरुमा औषधी सहितको स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली पठाइएको बताइएको छ। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले खानेकुरा र प‌िउने पानी पठाउने कामपनि सुरु भईसकेको बताए ।
पोस्ट गरिएको 7:44 १ अप्रि.7:44 १ अप्रि.
हावाहुरीको आकलन गर्न सकिएन: मौसम विभाग
Quote Message: हामीले चलाइरहेको सफ्टवेयर संसारमा जहाँ पनि प्रयोग गर्न सकिने खालको हो... [तर] स्थानीय वायुको प्रभाव तल्लो भेगमा आकलन गर्न हाम्रो प्रणालीले सकेन। from सरजुकुमार वैद्य महानिर्देशक, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हामीले चलाइरहेको सफ्टवेयर संसारमा जहाँ पनि प्रयोग गर्न सकिने खालको हो... [तर] स्थानीय वायुको प्रभाव तल्लो भेगमा आकलन गर्न हाम्रो प्रणालीले सकेन।
सरजुकुमार वैद्य महानिर्देशक, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
आइतबार साँझ आएको विनाशकारी हावाहुरीबारे आवश्यक उपकरण र सफ्टवेयरको अभावका कारण समयमै जानकारी दिन नसकिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक सरजुकुमार वैद्यका अनुसार चितवनमा सिर्जना भएको हावाहुरीले पर्सा हुँदै बारासम्म प्रभाव पारेको थियो।
स्थानीय वायुको प्रभाव र मौसममा हुने बदलीबारे जानकारी दिन सक्ने प्रणालीको अभावका कारण आफूहरूले वर्षा र मेघगर्जनबारे पूर्वानुमान जानकारी जारी गरे पनि सम्भावित ठूलो खतराबारे भने जानकारी दिन ढिला भएको वैद्य स्वीकार्छन्।
थप पढ्नुहोस्: 'उपकरण र सफ्टवेयर नहुँदा खतरा पूर्वानुमान गर्न सकिएन'
पोस्ट गरिएको 7:12 १ अप्रि.7:12 १ अप्रि.
प्रधानमन्त्री ओली निरीक्षण गर्न घटनास्थल तर्फ जाँदै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित नेपाली सेनाको स्काई ट्रकमा झापाबाट बारा तथा पर्साका लागि उडेका झापाबाट हाम्रा सम्वाददाता उमाकान्त खनालले बताएका छन्।
ओली आइतवार गृहजिल्ला झापा आएका थिए।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री ओली हावाहुरीबाट प्रभावित जिल्लाको निरीक्षण गर्न गएका हुन्।
उनलाई लिन सेनाको स्काई ट्रक भद्रपुर विमानस्थलमा आएको थियो।
विहान प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले यस विषयमा ट्वीट गरेका थिए
पोस्ट गरिएको 6:56 १ अप्रि.6:56 १ अप्रि.
घाइतेका अनुहारमा ‘हावाहुरीको डर’
हिजो राति बारा र पर्सा जिल्लाका विभिन्न गाउँमा हावाहुरीले क्षति पुगेको थाहा पाएपछि म बिहानै उठेर वीरगन्जस्थित उपक्षेत्रीय नारायणी अस्पताल र न्याशनल मेडिकल कलेज पुगेँ।
बाराको जितपुर र सिमराका अस्पतालहरूमा पनि बिरामीहरूको चाप धेरै थियो।
नारायणी अस्पताल पुग्दा घाइते र बिरामीहरूको अवस्था निकै दयनीय देखिन्थ्यो।
राति आएको हावाहुरीको डर मानिसहरूको अनुहारमा अझै देखिन्थ्यो।
अस्पतालमा भर्ना भएका र बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेका घाइतेहरू घरमा आफ्ना बालबच्चाको स्थितिबारे सोधखोज गर्दैथिए।
घरको अवस्था के छ, आफन्तहरू कहाँ बसिरहेका छन् भन्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिन्थ्यो।
अस्पतालका शय्यामा मात्रै नभई भित्र बाहिरका खाली ठाउँहरूमा पनि घाइतेहरू उपचारका लागि पर्खिरहेका थिए।
त्यस्तै दृश्य न्याशनल मेडिकल कलेजमा पनि देखिन्थ्यो।
तीमध्ये उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने अरूको उपचार हुँदैछ। घाइतेमध्ये केहीको टाउको, खुट्टा, पेट आदि अङ्गमा चोटपटक लागेको देखिएको छ।
अधिकांश व्यक्तिले आफू घरभित्र भएका बेला घाइते भएको बताएका छन्।
पोस्ट गरिएको 6:47 १ अप्रि.6:47 १ अप्रि.
विनाशकारी हावाहुरीले पुर्‍याएको क्षतिको भिडिओ
Video caption: बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले पुर्‍याएको क्षतिबारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले पुर्‍याएको क्षति
पोस्ट गरिएको 6:34 १ अप्रि.6:34 १ अप्रि.
संघीय सरकारले चिकित्सक पठायो
हावाहुरीका कारण बारा र पर्साका विभिन्न अस्पतालमा घाइते र बिरामीको चाप बढिरहँदा त्यहाँ चिकित्सकको अभाव भएको भन्ने खबर आएपछि केन्द्रबाट चिकित्सकहरू पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, न्याशनल मेडिकल कलेजलगायतका अस्पतालहरूमा घाइतेहरूको सङख्या धेरै हुँदा उपचार गर्ने चिकित्सकको अभाव भएको प्रदेश २ का मन्त्रीहरूले नै गुनासो गरेका थिए।
त्यस्तो जानकारी आएलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काठमाण्डूबाट चिकित्सकहरू पठाइएको गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए।
पोस्ट गरिएको 6:29 १ अप्रि.6:29 १ अप्रि.
जीवनकालमै नदेखेको हावाहुरी
पीडितहरूले आफ्नो जीवनकालकै भयावह हावाहुरी देखेको बताएका छन्।
Quote Message: मैले भीषण हावाहुरी अन्यत्र आउने गरेको सुनेकी थिएँ, तर बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म आफैँले यस्तो देखेकी थिइनँ। हावाहुरीसँग असिना पर्न थालेपछि मानिसहरू घरभित्र पसे। हावाहुरीले घर नै भत्काएपछि र छानाहरू उडाएपछि मानिसहरू कहाँ जान्थे र? from उर्मिला सिंह फेटा, बारा
मैले भीषण हावाहुरी अन्यत्र आउने गरेको सुनेकी थिएँ, तर बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म आफैँले यस्तो देखेकी थिइनँ। हावाहुरीसँग असिना पर्न थालेपछि मानिसहरू घरभित्र पसे। हावाहुरीले घर नै भत्काएपछि र छानाहरू उडाएपछि मानिसहरू कहाँ जान्थे र?
उर्मिला सिंह फेटा, बारा
पोस्ट गरिएको 6:27 १ अप्रि.6:27 १ अप्रि.
मुख्यमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न आह्वान
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहयोगका लाग‌ि आह्वान गरेका छन्।
पोस्ट गरिएको 6:25 १ अप्रि.6:25 १ अप्रि.
सयौं परिवार घरवारविहीन
पोस्ट गरिएको 6:14 १ अप्रि.6:14 १ अप्रि.
सात जनालाई काठमाण्डू ल्याइयो
गम्भीर घाइते भएका सात जनालाई सिमरा एअरपोर्टबाट नेपाली सेनाको स्काई ट्रकबाट काठमाण्डू ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
उनीहरूको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचार सुरु भएको छ।
पोस्ट गरिएको 6:12 १ अप्रि.6:12 १ अप्रि.
प्रदेश नं २ को मन्त्रिपरिषद्ले हावाहुरीमा परेर ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई राहतस्वरूप तीन लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
घाइतेहरूको उपचारमा हुने खर्च बेहोर्ने पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री राहतकोषमा सहयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ।
पोस्ट गरिएको 6:10 १ अप्रि.6:10 १ अप्रि.
बारामा ठूलो मानवीय क्षति
आइतवार साँझ आएको हावाहुरीका कारण बारा र पर्सामा कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु भएको प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताएका छन्। हावाहुरीले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति बारा जिल्लामा भएको छ। राउतका अनुसार त्यहाँ २९ जनाको मृत्यु भएको छ।
तर गृह मन्त्रालयको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म २६ जनाको मात्र मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।
उसका अनुसार हावाहुरीका कारण छ सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका र तीमध्ये ३४३ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्।
घाइतेहरूको पर्सा र बाराका अस्पतालहरूमा उपचार हुँदैछ।